Iindlela ezi-8 zokunyusa abalandeli be-Instagram ngaphandle kokuchitha imali eninzi Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Disemba 26, 2018 0 IiCententarios 1790
I-Instagram inabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezintlanu abasebenzayo. Izibalo kwi-Instagram zinokuchazwa njengezinomdla kwaye ziyakhuthaza. Ukuwa okuncinci kuya kukumangalisa kwaye kwangaxeshanye kukuvuyise. I-Instagram inezigidi ezingaphezu kwe-500 zabasebenzisi abasebenzayo, ngaphezulu kwe-300 yezigidi zabasebenzisi abasebenzayo ngosuku, i-80% yabasebenzisi bangaphandle kwe-US. I-UU., I-4.2 yezigidigidi ndiyayithanda ngemini nangaphezulu kwe-95 yezigidi zeefoto kunye neevidiyo ezifakwe ngosuku. Oku kumangalisa nje kwaye kuyigolide kubathengisi be-intanethi kunye namashishini. Esi sizathu sokuba abaninzi banomdla indlela yokwandisa abalandeli be-Instagram kwiiprofayili zabo.
Ezo zibalo kufuneka zithumele umqondiso kwiiseli zakho kwaye zikuvumela ukuba uqonde ukuba ibaluleke kangakanani i-Instagram kwishishini lakho. Ingxaki kukuba, ungena kanjani kwi-Instagram kwaye ufumane abalandeli abaya kuba ngabathengi bakho abathembekileyo? Ndiza kukubonisa ukuba ungayenza njani kula manyathelo nezikhokelo ezilandelayo. Sikuxelela konke malunga nokuthenga kwi-intanethi.
Iindlela ze-7 zokunyusa abalandeli be-Instagram
1 Bhalisa kuFacebook
Le yeyona ndlela ilula kwaye ikhawulezayo yokuseta iakhawunti yakho ye-Instagram. Iya kukuvumela ngokuzenzekelayo ukuba ulandele abahlobo bakho abasele bekwi-Instagram kwaye, nabo, baya kukulandela. Abahlobo bakho kunye nosapho baya kuba ngabalandeli bokuqala kwi-Instagram abaya kukunceda ukuphucula iprofayili yakho kwaye bakulungiselele kwisivumelwano esiphambili.
2 Iifoto ezisemgangathweni
Eyona nto ibaluleke kakhulu kwi-Instagram ngumgangatho weefoto zakho. Qiniseka ukuba imifanekiso yakho ikumgangatho ophezulu ngaphambili zithumele kwi-Instagram. Ukuba neefoto ezisemgangathweni kwi-Instagram kunceda ukuthandwa ngakumbi, izimvo kunye nabalandeli abaninzi, eya kukunceda ufumane inqanaba kwaye ngaphezulu kwabo bonke abakhuphisana nawe ngaphakathi kwe-niche efanayo. Ukuba uthatha iifoto ngekhamera, qiniseka ukuba ukukhanya kunye nokugxila kulungile ukufumana iifoto ezifanelekileyo kufuneka uhambe ngentsholongwane kwi-Instagram.
3 Njengezinye iifoto
Le nto ndiyibiza ngokuxoka. Kufana nosuku lwakho lokuqala esikolweni, akukho mntu uyaziyo kuwe kwaye ekuphela kwendlela abantu abanokuthi baqale ukunxibelelana nawe ngayo inyathelo lokuqala lokubulisa okanye ukuzazisa. Xa uthanda iifoto zabanye abantu, abo bantu bayindwendwela iprofayile yakho kwaye bathathe isigqibo sokukulandela Kwaye bayazithanda iifoto zakho. Le yindlela oqala ngayo ukukhulisa inethiwekhi yakho kwi-Instagram. Nyusa uphawu lwakho ku-Instagram ngoku.
4 Landela abanye
Le yeyona ndlela ikhawulezayo yokwandisa abalandeli baka-Instagram. Xa ulandela abanye, bagqiba kwelokuba bakulandele kunye nokwenza unxibelelwano phakathi kwazo. Oku kunceda ukukhulisa abalandeli bakho kwaye ndiyayithanda kwiifoto onazo kwiprofayili yakho. Landela abanye ukuze ufumane abalandeli abaninzi.
5 Gqabaza kwezinye iifoto
Le ndlela ifuna ixesha elininzi kunye nomsebenzi, kodwa ngokuqinisekileyo kufanelekile. Xa uphawula ngeefoto zabanye abantu, wongeza ithuba lokuba bayokulandela kwaye bathande iifoto zakho. Thatha ixesha elivela kwikhalenda yakho yezentengiso yeendaba zentlalo kunye nokunika izimvo kwiifoto zabanye abantu ukwandisa abalandeli babo Amabali e-Instagram.
6 Sebenzisa iiHashtag ezifanelekileyo
IiHashtags ziye zaqhubela phambili kakhulu kunxibelelwano lwentlalo kwaye i-Instagram ayikho enye into. Ukusetyenziswa kwee-hashtag ezifanelekileyo kukunceda ukuba ube nokubonakala ngakumbi kunye nokuthandwa kwi-Instagram. Ii-hashtag ezingakumbi ozisebenzisayo, ziya kuba zithandwa kakhulu ziifoto zakho. Oku kuthetha ukuthandwa ngakumbi, abalandeli abaninzi kunye namagqabaza amaninzi anceda ukuphucula iprofayile yakho.
7 Ukutshintshwa kolwazi
Le yindlela elula yokunyusa abalandeli be-Instagram nge-win to win form. Yimeko yokuphumelela yomibini kumalungu omabini. Le ndlela inceda ukukhuthaza iprofayili yakho. Kufuneka nje ufumane abantu ngaphakathi kwe-niche yakho kwaye unxibelelane nabo kwaye ucele inqaku. Unokwenza oku ngokuthumela kubo i-imeyile elula okanye isicelo kwi-Instagram.
8 Thenga abalandeli be-Instagram
Iinkampani ezininzi nangakumbi zithathe isigqibo Thenga abalandeli be-Instagram ukubona ubunzima babo bezentlalo bunyukile. Yindlela yokuphembelela abasebenzisi abatsha abalandela ukulandela iakhawunti. Xa ubona iprofayili enabalandeli abaninzi, abanye baya kukhuthazeka ukuba balandele nawe.
1 Iindlela ze-7 zokunyusa abalandeli be-Instagram
1.1 1 Bhalisa kuFacebook
1.2 2 Iifoto ezisemgangathweni
1.3 3 Njengezinye iifoto
1.4 4 Landela abanye
1.5 5 Gqabaza kwezinye iifoto
1.6 6 Sebenzisa iiHashtag ezifanelekileyo
1.7 7 Ukutshintshwa kolwazi
1.8 8 Thenga abalandeli be-Instagram